Showing posts with label learn-english. Show all posts
2/26/2014 09:56:00 AM learn-english
တစ်ခုခု လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တာမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် အခြေအနေ တစ်ခုခုမှာ ကိုယ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်ဘဲ ကိုးယိုးကားယား ဖြစ်ရပုံကို အင်္ဂလိပ်လို အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
- I didn't know anyone at the party and I felt really awkward at first.
- I find myself in an awkward situation.
- She gets embarrassed if we ask her to sing.
- He's easily embarrassed.
၃) Uncomfortable=သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်တာ
- My brother always felt uncomfortable on such formal occasions.
- All this talk about love and romance was making me uncomfortable.
- Marlar madeaclumsy attempt to apologize.
- She always felt clumsy when she had to stand in front of the class.
၅) Uneasy=နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေတာ
- His presence made her feel uneasy.
- My daughter always feels slightly uneasy with strangers.
၆) Ill at ease=သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်တာ
- I felt ill at ease in such formal clothes.
- His mother is always ill at ease whenever she has to travel alone.
2/24/2014 05:45:00 PM learn-english
A new student came to the class.
ကျောင်းသားသစ်လေး တစ်ယောက် အတန်းကို ရောက်လာတယ်။
After asking his name the teacher said,' What does your father do?'
သူ့နာမည်ကိုမေးပြီး ဆရာမက ပြောတယ်..။ "မင်းအဖေက..ဘာလုပ်သလဲ"
Student: 'Whatever mom says!'
ကျောင်းသား။ ။ "အမေပြောသမျှ အကုန်လုပ်ပါတယ် ..ဆရာမ"
Teacher : Everyone who thinks he's stupid,please stand up.
ဆရာမ။ ။ကဲ..အားလုံး..ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိုက်ကန်းတယ်လို့ ထင်တဲ့သူရှိရင် မတ်တပ်ရပ်ပြစမ်း။
Afterawhile,only one student stood up.
Teacher:So,you think you are stupid?
ဆရာမ။ ။"မင်းက..ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိုက်မဲတယ်ထင်လို့လား။"
Teacher:Then, why did you stand up?
ဆရာမ။ ။"မထင်တာများ..ဘာလို့ မတ်တပ်ရပ်တာလဲ..ကွယ်။"
Student:I felt bad seeing you standing,alone,ma'am.
ကျောင်းသား။ ။"ဆရာမတစ်ယောက်တည်းရပ်နေတာ မြင်ရတော့ ... စိတ်မချမ်းသာလို့ပါ ..ဆရာမ။"
◙ အမေရိကကို ရှာတွေ့သူ
Teacher: Maria, please point to America on the map.
ဆရာမ။ ။မရီယာ..ရေ..။မြေပုံပေါ်က အမေရိကတိုက်ကို ထောက်ပြပါ ဦးကွယ်။
Teacher: Well done! Now class, who found America?
ဆရာမ။ ။တော်လိုက်တာ။ကဲ..အမေရိကကို ဘယ်သူရှာတွေ့ခဲ့သလဲဆိုတာ တစ်တန်းလုံး ဖြေပါဦးကွယ်။
Class: Maria did,teacher.
◙ တစ်ခုတည်း မေးမှာဆို
In Viva, နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ မှာ...ဖြစ်ပါတယ်။
Lecturer : "Shall I ask you ten easy questions or one tough one?"
ကထိက။ ။"မင်းကို လွယ်တဲ့မေးခွန်း ဆယ်ခုမေးရမလား။ခက်တာ တစ်ခုပဲ မေးရမလား။"
Student: "Ask me tough one"
ကျောင်းသား။ ။"ခက်တဲ့မေးခွန်း တစ်ခုပဲ မေးပါ။"
Lecturer : "What comes first ,Day or Night?"
ကထိက။ ။"နေ့ နဲ့ ည...ဘယ်ဟာက အရင်လာတာလဲ။"
ကျောင်းသား။ ။"နေ့က အရင်လာပါတယ်။"
Lecturer : "How can you exactly say that?"
ကထိက။ ။"မင်းက..အဲဒီလို..ဘာလို့ အတိအကျ ပြောနိုင်တာလဲ။"
Student: "Sorry sir,you said you'll ask only one question."
ကျောင်းသား။ ။"စိတ်မရှိပါနဲ့..ခင်ဗျာ။ဆရာပဲ..မေးခွန်းတစ်ခုတည်း မေးမယ် ပြောထားတယ်လေ။"
◙ နောက်ကျရတဲ့ အကြောင်း
Onceavery funny girl comes late to class
တစ်ခါက အရမ်းပျော်တတ်တဲ့မိန်းခလေးတစ်ယောက် အတန်းကို နောက်ကျ ပြီး ရောက်လာတယ်။
ဆရာ။ ။"ဘာဖြစ်လို့ နောက်ကျရတာလဲ။"
Girl: One boy is following me sir.
မိန်းခလေး။ ။"ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကျွန်မနောက်ကို လိုက်နေလို့ပါ ..ရှင့်။"
ဆရာ။ ။"အဲဒါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။"
Girl: That boy was walking very slow.
မိန်းခလေး။ ။"အဲကောင်လေးက ဖြေးဖြေးလေး လမ်းလျှောက်နေတာလေ။"
◙ Maths အဓိပ္ပါယ်
ဆရာ။ ။"Maths (သင်္ချာ)ရဲ့ စာလုံးပေါင်း အရှည်က ဘာလဲ။"
Student: Mentally Affected Teachers Harrasing Students
ကျောင်းသား။ ။"ကျောင်းသားများကို နှိပ်စက်နေသည့် စိတ်မနှံ့သော ဆရာများ" ပါ..ခင်ဗျာ။
Teacher: Suppose,I give you two dogs.Then,I again give you two dogs.How many will you have?
ဆရာမ။ ။ဆရာမက မင်းကို ခွေးနှစ်ကောင် ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ နောက်ပြီး..နောက်ထပ် နှစ်ကောင်ထပ်ပေးဦးမယ်ဆိုရင် မင်းမှာ ...ဘယ် နှကောင်ရှိမလဲ။
ဆရာမ။ ။ဘယ်လို..ငါးကောင် ဖြစ်ရတာလဲ။
ကျောင်းသား။ ။အိမ်မှာ ခွေးတစ်ကောင် ရှိပြီးသားလေ။
◙ လင်ကွှန်း ဆယ်နှစ်ပြည့်
ဆရာမ။ ။"၁၈၀၉ ခုနှစ်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။"
Student:Abraham Lincoln was born.
ကျောင်းသား။ ။"အေဗရာဟန်လင်ကွန်း မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။"
ဆရာမ။ ။"၁၈၁၉ ခုနှစ်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။"
Student:Abraham Lincoln was ten years old.
ကျောင်းသား။ ။"အေဗရာဟန်လင်ကွန်း ဆယ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်..ဆရာမ"
Ouestion: In which battle did Napoleon died?
မေးခွန်း။ ။"ဘယ်တိုက်ပွဲမှာ နပိုလီယန် ကျဆုံးခဲ့တာလဲ။"
Answer: His last battle.
အဖြေ။ ။"သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲမှာပါ။"
Ouestion: Where was the Declaration of Independence signed?
မေးခွန်း။ ။"လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းကို ဘယ်နေရာမှာ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြတာလဲ။"
Answer:At the bottom of the page.
Ouestion:What's the main reason for divorce?
မေးခွန်း။ ။"ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းက ဘာလဲ။"
2/24/2014 11:40:00 AM learn-english
(Study နှင့် ဆင်တူယိုးမှား စကားလုံးများ)
» » သင်ယူသည်၊လေ့လာသည်။စာကျက်သည်။ပညာသင်သည်။
အတန်းတက်ပြီး ပညာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကိုယ့်ဖာသာ စာဖတ်ပြီး လေ့လာ တာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အကြောင်းအရာ/ဘာသာရပ် တစ်ခုခုကို လေ့လာ/သင်ယူတာကို study လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Soe Oo is currently studying at Dagon University.
ယခုလောလောဆယ် ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ စိုးဦး ပညာသင်ယူနေတယ်။
I've been studying English for six years now.
ငါ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေတာ အခုဆို ၆ နှစ်ရှိနေပြီ။
» » (ဘာသာရပ်တစ်ခုကို )လေ့လာသင်ယူသည်။
ကျောင်း၊တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်မှာ ကိုရွေးချယ်သင်ယူတဲ့ ဘာသာရပ်အတွက် သုံးပါတယ်။
In my final year,I decided to take English ,French, and economics.
နောက်ဆုံးနှစ်မှာ အင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်နဲ့ စီးပွားရေးဘာသာတွေကို (သင်)ယူဖို့ ငါ..ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
မြန်မာတွေကလည်း တက္ကသိုလ်မှာ "ဘယ်..ဘာသာယူတယ်" ဆိုတာမျိုး သုံး တတ်ကြပါတယ်။
What subject do you take at college?
ကောလိပ်မှာ ဘယ်ဘာသာ ယူတာလဲ။
» » (ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို) သင်ယူသည်။
တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်မှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို သင်ယူတာကို do နဲ့သုံးပြီး လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
I can't decide whether to do German or Spanish next year.
နောက်နှစ်မှာ ဂျာမန်ဘာသာယူရမလား စပန်ဘာသာ ယူရမှာလား ဆိုတာ ငါ..မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူး။
Doacourse = ဘာသာရပ်တစ်ခု၏ သင်ရိုး/သင်တန်းကို တက်ရောက် သင်ယူသည်။
Why not doalanguage course at your local college?
မင်းတို့ဒေသက ကောလိပ်မှာ ဘာသာစကားသင်ရိုးတစ်ခုခု တက်ပါ့လား။
» » (ဘာသာရပ်တစ်ခုကို) သင်ယူသည်။
တက္ကသိုလ်မှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုကို သင်ယူနေတာကို read သုံးပြီး ပြောနိုင် ပါတယ်။
She went on to read medicine at Edinburgh.
သူမဟာ အက်ဒင်ဘာ့ဂ် တက္ကသိုလ်မှာ ဆေးပညာကို ဆက်လက် သင်ယူခဲ့ တယ်။
Ko Ko is reading philosophy at Oxford.
ကိုကိုဟာ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာ ဒဿနိကဗေဒပညာရပ်ကို သင်ယူနေ တယ်။
◙ Major in
» »(အဓိကဘာသာအဖြစ်) သင်ယူသည်။
တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်မှာ အဓိကမေဂျာဘာသာရပ်အဖြစ် သင်ယူတဲ့အခါ သုံး ပါတယ်။
Ye Ye Than majored in History at Shwebo University.
ရီရီသန်းက ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်းမေဂျာ သင်ယူခဲ့တယ်။
မင်းက..ဘယ်ဘာသာရပ်ကို အဓိက သင်ယူနေတာလဲ။(ဘာ..မေဂျာလဲ)
◙ minor in
» »(သာမန်ဘာသာရပ်အဖြစ်) သင်ယူသည်။
တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်မှာ ဒုတိယအရေးကြီးဘာသာရပ်အဖြစ် သင်ယူတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
I'm planning to study computer science,but I still might minor in English.
ငါ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံ သင်ယူဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို လည်း ဒုတိယဦးစားပေးဘာသာအဖြစ် သင်ယူဖြစ်ဦးမယ်။
◙ Take/Have lessons
» »(သင်ခန်းစာ/သင်တန်း) တက်ရောက် /သင်ယူသည်။
အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ.. ဆရာတစ်ဦးဦးဆီ.. သင်တန်းတက်တာ/သင်ခန်းစာ သင်ယူတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
My mother wants me to take violin lessons.
အမေက ကျွန်တော့်ကို တယော-သင်တန်း တက်စေချင်တယ်။
I'm having English lessons after work.
အလုပ်ပြီးတဲ့အခါ ငါ..အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်နေတယ်။
I want to take lessons in golf.
2/23/2014 08:59:00 AM learn-english
(Short Conversations In Use)
ဒီနေ့လည်း အသုံးတည့်နိုင်လောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားအတိုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) Need anything?
(2) A bottle of beer,pls!
(3) Anything you say!
(4) It'll keep!
(5) Keep up the good work!
(6) Don't beamartyr.
(7) Do you follow?
(8) I can't wait!
(9) Make yourself understood!
(10) Yes, yes!
(12) Bright idea!
(13) What's the big idea?
(14) You hear?
(15) All too often!
အခုတလော ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကို မသိဘူး။
(စိတ်ပျက်စရာ၊ညစ်စရာ၊၀မ်းနည်းစရာ ခဏခဏ ဖြစ်နေလို့)
2/23/2014 08:58:00 AM learn-english
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြတ်သွားတာ မြင်တော့..... ဆရာမက ဆူညံနေတဲ့ အတန်းသားတွေကို လှမ်းပြီး သတိပေးလိုက်တယ်။သူသတိပေးချင်တာက "တိတ်တိတ်နေကြ၊ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြတ်သွားနေတယ်"......ပေါ့။ ဒါပေမယ့်.. အင်္ဂလိပ်လို လှမ်းသတိပေးလိုက်တာက.."Keep quiet, the principal has passed away"တဲ့လေ။ကျောင်းအုပ်ကြီးသာ.... ကြားရင် တစ်ခါတည်း သတိလစ်သွားမလားပဲ။ဟုတ်တယ်လေ...။ဖြတ်သွားတာကို passed by လို့ သုံးရမှာကို ဆရာမက by အစား မှားပြီး away ကို သုံးလိုက်တာကိုး။pass away ဆိုတာ"သေတာ"ခင်ဗျ။ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့.. ဆရာမပြောတာကို ဘာသာပြန်ရရင် "တိတ်တိတ်နေကြစမ်း။ကျောင်းအုပ်ကြီး..ဆုံးသွားပြီ။"ဖြစ်သွားတာပေါ့..။
တစ်ခါကလည်း... ဆရာတစ်ယောက်က ကျောင်းသားတစ်ဦးကို အောက်ကျ နေတဲ့ပြက္ခဒိန်ကို နံရံမှာပြန်ချိတ်ခိုင်းသတဲ့။ကျောင်းသားက ပေကတ်ကတ် လုပ်နေတော့ ဆရာလည်း စိတ်ဆိုးပြီး''ပြက္ခဒိန်ကို မင်းချိတ်မှာလား ငါကိုယ် တိုင်ချိတ်လိုက်ရမှာလား"..ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို...."Will you hang that calender or else I'll hang myself" လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။
I'll hang it myself လို့ ပြောရမှာ I'll hang myselfဆိုတော့..''ပြက္ခဒိန်ကို မင်းချိတ်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ငါ ဆွဲကြိုးချသေလိုက်ရမလား''.....ဖြစ်သွား တာပေါ့။အဲဒီအခါကျမှ ကျောင်းသားဟာ ဆရာ သေမှာကြောက်လို့ သူပဲထချိတ်လိုက်ရသတဲ့။သူသာ မချိတ်ရင်..ဆရာ့ဘ၀ဟာ မတွေးဝံ့စရာပဲ .နော်။
တစ်ခါက ဆရာမတစ်ယောက်က ဒေါသထွက်နေရင်း...ကျောင်းသားတွေကို
''မင်းတို့နာမည်နဲ့ မင်းတို့ အဖေနာမည်ချရေးကြစမ်း'' ..ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောချလိုက်တာက..
'' Write down your name and father of your name!!"...တဲ့လေ။
အမှန်က name of your father ဟာ.. father of your nameဆိုပြီး ဒေါသနဲ့ လည်ထွက်သွားတာပါ။အဲဒီတော့ "မင်းတို့ နာမည်နဲ့ မင်းတို့ နာမည်ရဲ့အဖေကို ချရေးကြစမ်း"လို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်သွားတာပေါ့။ကျောင်းသားတွေလည်း မျက်စိ လည်၊ အဖေ့နာမည်လည်း ပတ်ချာရမ်းသွားတာပေါ့လေ။အရက်မသောက်ပဲ အဖေမူးမယ့်ကိန်းပဲ။သြော်..ဒေါသရှေ့ထားလည်း မှားတတ်ပါလား.အင်္ဂလိပ် စာရယ်။
ဆရာတစ်ယောက်က စာသင်နေတုန်း အတန်းအပြင်ဖက်မှာ..မျောက်တစ် ကောင်က ဆော့နေသတဲ့။ကျောင်းသားတွေလည်း ဆရာစာသင်နေတာ စိတ်မ၀င်စားကြပဲ..အပြင်မှာဆော့နေတဲ့ မျောက်ကို ကြည့်နေကြတာပေါ့။ ဒါကို ဆရာက မြင်ရော..ကျောင်းသားတွေကို စိတ်ဆိုးပြီး .."အခန်းထဲမှာ ငါတစ်ယောက်လုံးစာသင်နေတာကို ဘာကြောင့်...အပြင်ကမျောက်ကို ကြည့်နေကြတာလဲ" လို့ အင်္ဂလိပ်လို အော်ပြောလိုက်သတဲ့။သူ..ပြောလိုက် တာက"Why are you looking at the monkeys outside when I am in the class?!"တဲ့လေ။အကျအနကောက်တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့။ပြုံးမှာပေါ့..။သေသေချာချာ..ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်"အတန်းထဲမှာ ငါတစ်ယောက်လုံးရှိနေတာကို ဘာလို့ ..အပြင်က မျောက်ကို ကြည့်နေကြ တာလဲ"..ဆိုတော့ကာ..။သြော် ဒီဝါကျကလည်း ..မှန်တော့မှန်ပါရဲ့။ပြောတဲ့ သူကိုတော့ လူစင်စစ်ကမန်းကီးဘ၀ရောက်စေနိုင်ပါလား လို့တွေးမိပါတယ်။ တယ်လဲ..ခက်လှပါလား..အင်္ဂလိပ်စာရယ်။
တစ်ရက်တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက အတန်းတွေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု နေပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကလည်း မဆူကြဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချက်ပြကြ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတိပေးကြတာပေါ့။
အဲဒီထဲမှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က "ရှူး..တိုးတိုး..ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး လှည့်နေတယ်" ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောသတဲ့။သူပြောလိုက်တာက. . "Shuhh... quiet... the principal is revolving around."..တဲ့လေ။အမှန်က လှည့်လည်ကြည့်ရှုတာကို looking around ဆိုပြီး ဖြစ်ရမှာကို revolving around လို့ မှားသုံးလိုက်တော့.." ရှူးတိုးတိုး တို့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး လည်ထွက်နေတယ်"..ဖြစ်ကရော။ဒီကျောင်းသားလုပ်ပုံနဲ့..ကျောင်းအုပ်ဆရာတော့ တော်တော် မူးသွားမှာပဲနော်။
ပြောနည်း ၁၀၀ အခန့်သုံး/အရပ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော (၂၀)
2/22/2014 03:47:00 PM learn-english
97. THANK PEOPLE FOR COMING
အခမ်းအနားလာ ပရိသတ်အား ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်း
အခုလို တက်ရောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I've been delighted to
I've been delighted to be able to speak to you.
မိတ်ဆွေနဲ့ စကားပြောခွင့်ရတာ ၀မ်းမြောက်ပါတယ်။
I'd like to show my thanks
I'd like to show my thanks by inviting you to my house for drinks.
ကျွန်တော့်အိမ်ကို တစ်ခုခုသောက်ဖို့ ဖိတ်ရင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြပါရစေ။
I have enjoyed your company today.
98.THANK FOR LETTING YOU SPEAK
Thank you, John. I want to stress on the fact Jo is irreplaceable.
Thanks for allowing me to speak at this forum.
အခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ စကားပြောခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thanks for calling on
Thanks for calling on me. It'sagreat chance to share my ideas.
ကျွန်တော့်ကို ပြောခိုင်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့် စိတ်ကူးတွေကို မျှဝေပေးဖို့ အထူးအခွင့်အရေး တစ်ရပ်ပါ။
I appreciate the opportunity to address
I appreciate the opportunity to address suchadistinguished group.
အခုလို ဂုဏ်သရေရှိလှတဲ့ အဖွဲ့ကို အမှာစကားပြောကြားခွင့် ရတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
It'sapleasure to be able to talk about the MX project.
MX စီမံကိန်းအကြောင်းပြောခွင့်ရတာ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။
99. SAY BYE FORMALLY နှုတ်ဆက်ခြင်း
Goodbye. Please send my regards to Miss Burkes.
Miss Burkes ကို ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါဦး။
ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောရတာ ကောင်းပါတယ်။
It's beenapleasure to
It's beenapleasure to get to play golf with you.
မိတ်ဆွေနဲ့ ဂေါ့ဖ်ရိုက်ရတာ ပျော်ရွှင်စရာပါခင်ဗျား။
Hope we meet again before next summer.
နောက်နွေမတိုင်ခင် ပြန်တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
100. SAY BYE INFORMALLY အရပ်ဆန်ဆန်နှုတ်ဆက်ခြင်း
See you later.နောက်မှတွေ့မယ်။
Take care. Till tomorrow.
Cheers. Give my love to Jeannette.
ချီးယားစ်။ဲနညေညနအအန ကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့။
So Long. Lovely to see you again.
2/22/2014 09:46:00 AM learn-english
(1) Absolutely stunning!
(2) Nice place!
(3) If you dare,try!
(4) Haveareason each.
(5) Respective job!
လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ အလုပ်လေးပဲ။
(6) Oh quite!
(7) So I inferred!
(8) Keep it up!
(9) Feel at home!
(10) Eat up all!
(11) Any more?
(12) No more.
(13) Need assistance?
(14) Anything's wrong?
(15) Any hardships?
အခက်အခဲတွေ ရှိနေလို့လား။ ။
2/21/2014 08:37:00 AM learn-english
(1) Another voice!
(2) The worst thing!
(3) Unsuccessful attempt!
(4) Happy waiting!
(5) Nothing else matters!
(6) That'sapoint!
(7) That solves it!
(8) Going to depart?
(9) Not Ma Ma!
(10) Sure do!
(11) That's bullshit!
(12) Have the heart?
(13) Stop sulking!
(14) That's life!
(15) Have courage!
တရားနဲ့ ဖြေပါနော်။ ။
"ချောမော လှပခြင်း" ကို အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများဖြင့် ဖွင့်ဆိုပုံ အမျိုးမျိုး
2/20/2014 10:47:00 AM learn-english
၁) Beautiful = လှပသော
(Stunningly beautiful = အလွန်အမင်း လှပသော)
- She looked stunningly beautiful that night.
၂) Pretty = ချောမောလှပသော
- You look so pretty in that dress.
၃) Elegant = တင့်တယ်လှပသော
- She was tall and elegant.
၄) Gorgeous = အလွန်အမင်း ချောမောလှပသော (စကားပြောတွင်သုံးနိုင်)
- His little sister isagorgeous girl.
၅) Graceful = ကျက်သရေရှိသော
- The dancers were all tall and graceful.
၆) Stylish=ဖက်ရှင်ကျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော
- She was wearingastylish black woollen dress.
၇) Attractive = ဆွဲဆောင်မှုရှိသော
- Your new glasses are very attractive.
၈) Good-looking = Attractive
- A good-looking woman dressed in white came into the room.
အထက်ပါ အသုံးအနှုန်းတွေက များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ချောမာ လှပမှုအတွက် ရည်ရွယ် သုံးနှုန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများ ချောမောပုံကို ပြောရင်တော့ Handsome; Good-looking စသည်ဖြင့် သုံးနှုန်းရကြောင်း ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရကြမှာပါ။ အလျဉ်းသင့်တဲ့အခါမှာလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
2/16/2014 10:26:00 AM learn-english
မီဒီယာခေတ်ကြီးမှာ သတင်းအင်္ဂလိပ်စာ တတ်ဖို့လည်း လိုတာမို့ သတင်း လေးတွေကို တစ်ရက်တစ်ပုဒ် ဖတ်လာတာ ဒီနေ့ ဆို (၃)ပုဒ်ရှိပါပြီ။ တစ်လ လောက် ဆက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်သတင်းမှန်သမျှ အကုန်ဖတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်မှာ မလွဲပါဘူး။ သတင်းကို ဘာသာပြန်တဲ့အခါ..ထူးခြားချက် လေးတွေကို မှတ်ထားပါ။ သတင်းဖတ်နည်း ၊ ဘာသာပြန်နည်းကိုလည်း ကြားညှပ်ပြီး တင်ပေးပါဦးမယ်။အင်္ဂလိပ်စာ ထူးချွန်ကြပါစေ။
Haiti marked four years on Sunday sinceaviolent earthquake shattered the impoverished nation, which is still struggling to recover from the widespread devastation that killed 250,000 people.
ဆင်းရဲမွဲတေသောဟေတီနိုင်ငံတွင် လူ ၂၅၀၀၀ သေဆုံးစေခဲ့သော ငလျင် ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်မှာ ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်က လေးနှစ်ပြည့်ခဲ့သော်လည်း.. ပြန် လည် ထူထောင်ရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရဆဲပင် ဖြစ်သည်။
Haitians, many dressed in white, flocked to church services for somber remembrances for those who perished in the tragedy on January 12, 2010, which left aboutamillion people homeless.But four years on, nearly 200,000 people are still living in dire conditions in temporary shelters, and
residents complain of having received little help since NGOs left.
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးအတွင်း သေဆုံးခဲ့သူများအတွက် ဘုရားကျောင်းတွင် ကျင်းပသည့် အောက်မေ့ ၀တ်ပြုပွဲများသို့ အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားကြသော ဟေတီနိုင်ငံသား အများအပြားက တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။လူတစ်သန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေခဲ့သော ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု လေးနှစ်ကြာပြီး ဖြစ်သော်လည်း လူ၂၀၀၀၀၀ နီးပါးသည် ယာယီတဲများတွင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ အင်ဂျီအိုတို့ ထွက်သွားပြီးနောက် အကူအညီ အနည်းငယ်သာရရှိခဲ့သည့် ဒေသခံများက မကျေနပ်ခဲ့ကြပေ။
President Michel Martelly, who has faced protests over the slow pace of rebuilding, declared the anniversarya"day of reflection and commemoration."He lay flowers early in the day at the site ofamass grave where many of the quake's victims were buried.And he attendedaceremony at 4:53 pm (2153 GMT),
the moment the quake struck four years ago.
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ နှေးကွေးခြင်းအတွက် ဟေတီသမ္မတ မစ်ချယ်မာတယ်လီသည် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ဟေတီသမ္မတ သည် ဇန်န၀ါရီး ၁၂ ရက်တွင် သေဆုံးခဲ့သူအများအများအပြားကို မြှုပ်နှံ ထားသည့်နေရာတွင် လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ချခဲ့သည်။လျွန်ခဲ့သည့် လေးနှစ်က ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီ ၅၃ မိနစ်တွင် ပြုလုပ် ခဲ့သော အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားသို့လည်း သမ္မတကတက်ရောက်ခဲ့ သည်။
Flags were to be lowered throughout the country and businesses closed to mark the anniversary, while radio and television stations were encouraged to broadcast programming suitable to the emotional occasion.
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု လေးနှစ်ပြည့်တွင် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် အလံများကိုနှိမ့်ချလွှင့်ထူထားကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များလည်း ပိတ်ထားခဲ့ကာ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်သံများက ငလျင်နှင့် သက်ဆိုင် သည့် အစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
The government saysalarge portion of millions donated by governments and organizations the world over was spent on the post-earthquake emergency and not for reconstruction.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အစိုးရများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက လှူဒါန်းခဲ့သော အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာအနက် အမြောက်အများကို ငလျင်အလွန် အရေးပေါ်အခြေအနေ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သုံးစွဲခဲ့ပြီး ..ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးအတွက် မသုံးခဲ့ကြောင်း ဟေတီအစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။
ွှThe Prime Minister Lamothe criticized the international community for failing to provide promised aid of nearly $9 billion.
ဒေါ်လာကိုးဘီလီယံနီးပါး ကူညီမည်ဟု ကတိပျက်ကွက်ခဲ့သော နိုင်ငံတကာ ကို ၀န်ကြီးချုပ် လောရင့်လာမိုသီက ဝေဖန်ခဲ့သည်။
Haiti has recently seen an increase in anti-government protests, some breaking out into violent clashes.Protesters have called for the resignation of Martelly, who has been in office since 2011, and are also demanding better living conditions.Some 42 public buildings were among those flattened during the earthquake, and most are still
ဟေတီတွင် အစိုး၇ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ မြင့်တက်လာပြီး အချို့မှာ အကြမ်းဖက်မှုအသွင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ဆန္ဒပြသူများက ၂၀၁၁ ခုနှစ်က
တည်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်သမ္မတ မာ့တယ်လီကို ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန်နှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မားအောင် လုပ်ဆောင် ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ငလျင်လှုပ်ခတ်စဉ်က ပြည်သူပိုင် အဆောက် အဦး ၄၂ လုံး ပြိုကျခဲ့ပြီး အများစုမှာ အပျက်အစီးအပုံတိုင်း တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
Gems of English Conversations ( 43 )
2/08/2014 01:03:00 PM learn-english
Don't pay through the nose.
I wouldn't say good bye to you.
I wouldn't say ''no''.
I sisterly love you.
I love you more than l can say.
အံ့အားသင့်ကြောင်းကို ပုံစံမျိုးစုံ ပြောဆိုခြင်း
2/05/2014 07:55:00 PM learn-english
အံ့သြတာ၊ ဝမ်းသာတာ၊ ရုတ်တရက် ထိတ်လန့်သွားတာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုး ရှိတဲ့အထဲက အချို့ကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(Be [Verb To Be] + surprised = တအံ့တသြဖြစ်သည်)
- I was surprised at how quickly she agreed.
- They were surprised to find that he'd already left.
(Be amazed = အံ့အားသင့်သည်)
- I was amazed at her knowledge of French literature.
- We were amazed by his generosity.
(Be astonished = အလွန်အမင်းအံ့သြသည်)
- He was astonished to learn he'd won the competition.
- She seemed astonished that I had never been to Paris.
(Be startled = အံ့သြထိတ်လန့်သည်)
- I was startled by her question.
- The explosion startled the horse.
၅) Speechless = ဆွံ့အ မင်တက်မိသွားသော
- His words left her speechless.
- His father was speechless with anger.
၆) Unexpected = မျှော်လင့်မထားသော
- The announcement was not entirely unexpected.
၇) Taken aback
(Be taken aback = ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမှန်းမသိအောင် အံ့သြမိသည်)
Drink နှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူသော သောက်သုံးခြင်း အမျိုးမျိုး
2/03/2014 02:05:00 PM learn-english
၁) Drink = အရည်တစ်ခုခု သောက်သုံးမှီဝဲတာ
- What would you like to drink, coffee or tea?
၂) Drink straight from the bottle = ပုလင်းလိုက် မော့တာ
- He didn't ask foraglass, he just drank straight from the bottle.
၃) Drink up = အပြီးသတ် သောက်လိုက်တာ
- Drink up your tea so that I can wash the cups.
- Come on, drink up and we'll go home.
၄) Have = အရည်တစ်ခုခု သောက်တာ
- I'm going to haveacup of coffee. Do you want one?
- I hadacoke with my pizza.
၅) Take = အနည်းငယ်စီ သောက်တာ
- He tookalong drink of green tea from the jar.
၆) Sip = တစ်ငုံချင်းစီ ဖြည်းဖြည်းချင်း သောက်တာ
- She sat there, sipping at her tea.
- He slowly sipped his wine.
၇) Gulp down = တစ်ကျိုက်တည်း အများကြီး သောက်လိုက်တာ
- He gulped his beer down and went out of the door.
- "I'm coming," said his father, gulping down his coffee.
၈) Haveadrink = ယမကာ မှီဝဲတာ
- We hadafew drinks to celebrate.
- I won't have another drink because I have to drive home.
ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးပုံကို သုံးနှုန်းပြောဆိုခြင်းများ
2/03/2014 02:02:00 PM learn-english
(Difficult to read=ဖတ်ရခက်သော)
e.g. His handwriting is very difficult to read.
(Hard to explain=ရှင်းပြရ ခက်သော)
e.g. It's hard to explain these problems toachild.
(Tough decision=ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်ချက်)
e.g. His father always has to make tough decisions at work.
(Extremely complicated=အလွန်အမင်း ရှုပ်ထွေးသော)
e.g. The story is extremely complicated.
(A complex process=နားလည်ရခက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်)
e.g. The way humans think isacomplex process that scientists cannot fully explain.
(Challenging job=အစွမ်းအစ ပြခွင့်ရအောင် စိန်ခေါ်မှုရှိသော အလုပ်တာဝန်)
e.g. The job wasn't challenging enough for me.
(a demanding job=အားစိုက်ကြိုးစားရတဲ့ အလုပ်တာဝန်)
e.g. Beinganurse inabusy hospital isademanding job.
(a daunting task=စိတ်ပျက်စရာ အလုပ်)
e.g. Learning the whole text book in one week isadaunting task for me.
2/01/2014 10:30:00 PM learn-english
2/01/2014 12:38:00 PM learn-english
I'll never forget your gratitude.
Your gratitude is always on me.
You're real image of your father.
I honour your success.
You seen happy.
You'reabig body.
Your testing is getting beyond the joke.
I'm not flattering.
You have got the wrong sight.
You're good for yourself.
There'sahope for you.
1/31/2014 08:56:00 AM learn-english
ဒီနေ့လည်း အသုံးတည့်နိုင်လောက်တဲ့ ဘန်းစကား အင်္ဂလိပ်စကားအတိုလေးတွေကို ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) Cut the cackle!
(2) Just bog off!
(3) Anytime!Think nothing of it!
(4) Simple! Easy-peasy!
(5) Wrap up,you two!
(6) Showaleg!
(7) What for why?
(8) What an itty-bitty brain!
(9) Point taken!
(10) He's off his head!
(11) Keep in there!
(12) You're dern tootin'!
(13) You're excused!
(14) Get the lead out!
(15) Let's split!
Common Idioms (3) အသုံးများသောအီဒီယံစကားလုံးများ
1/31/2014 08:51:00 AM learn-english
1. back out (of)= withdraw from, fail to keepapromise=
After you have madeapromise, you should not back out of it.
You said you would go, you can't back out now.
သွားမယ်လို့ မင်းပြောခဲ့တယ်။ အခုမှတော့ မသွားလို့မဖြင့်တော့ဘူး။
2. back up = support = ထောက်ခံသည်။
I will back you up because I think you are right.
Can you back up your accusation?
မင်းစွဲချက်ကို သက်သေအထောက်အထား ပြနိုင်ရဲ့လား။
3. bad blood = ill feeling between two persons = မသင့်မြတ်မှု
We should not create bad blood between friends.
4. bank on = ( 1 )confidently expect: reckon on . မျှော်မှန်းသည်။တွက်ဆသည်။
Stupidly , I had only banked on catching two or three animals , so had not broughtareally large cage with me.
မျှော်မှန်းခဲ့မိတယ်။ ဒါကြောင့်လှောင်အိမ်ကြီးကြီးကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူယူမလာခဲ့မိတာပါပဲ။
bank on = (2) find reliable, depend on. = အားကုိယ်းသည်၊ အားထားသည်။
Those brakes can't be banked on if we have to pull up suddenly.
ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်ရမယ့်အခါမှာ ဘရိတ်တွေက အားကိုယ်းလို့ (အုပ်လို့) မရတော့ဘူး။
5. bank up = from intoaheap or ridge= စုပြုံလာသည်။ အစုအပုံဖြစ်လာသည်။
Seaweed banks up along the water's sage.
ပင်လယ်ရေမှော်များသည် ရေစပ်တစ်လျှောက်မှာ စုပုံလာသည်။
1/12/2014 10:30:00 PM learn-english
1/12/2014 07:29:00 PM learn-english